Umgangatho weLaminate yoMgangatho weeVenkile kunye noMenzi oqhelekileyo kunye noMthengisi | Moyo
I-4.5mm engatyibilikiyo IVinyl ...
Umgangatho elaminethiweyo For Wholesal ...
Umgangatho elaminethiweyo parquet ...
Ecomomic laminate umgangatho EIR ...
Umgangatho weLaminate kwii-Wholesales kunye nochungechunge oluqhelekileyo
Ubukhulu: Ubukhulu: 1218x240mm, 1218x198mm
Ubukhulu: 7mm 8mm 10mm 10.5mm 12mm okanye ezinye
Umphezulu Wood-iinkozo Embossed
Iklasi yeArasras: ac1 / ac2 / ac3 / ac4
Iimpawu zeMveliso: Iphaneli ebanzi
Ukufakwa: Cofa ngokudibeneyo- kuqhotyoshelwe ngaphantsi
Iwaranti yorhwebo: Iminyaka emi-3 yokuKhanya
Iwaranti yokuhlala: Unyaka wama-20
Isihloko seTsca Vi esihambelanayo
ICandelo le-01350 elithobelayo
Igolide yeGrenguard eqinisekisiweyo
Ukuphinda ipateni: 12 Ngokujikeleza kweBhodi
Umgangatho we-laminate flooring yinto edibeneyo yomgangatho. Yenziwe ngamanqanaba amaninzi, ijikeleze malunga neminyaka engama-50, kwaye yenzelwe ukongeza isitayile kunye nexabiso kwikhaya lakho ngelixa uhleli ukonakala. Rhoqo, yenzelwe ukuba ibonakale njengomthi (kodwa hayi rhoqo).
Kodwa inene yincam yomkhenkce. Kule mihla, kukho iitoni zeentlobo ezahlukeneyo zomgangatho we-laminate-nganye inezinto zayo ezilungileyo nezingalunganga. Kwaye ngelixa ihlala icinyiwe ngenxa yexabiso layo eliphantsi kunye nokubonakala kwangaphambili (ixoxo ngo-1980), i-laminate flooring iye yangena ngokwayo njengohlobo olomeleleyo, olunomtsalane, olunoqoqosho kunye nolondolozo oluphantsi.
Apha ngezantsi, siza kukunika i-411 kuzo zonke izinto zokulaminetha. Siza kuthetha ngento eyenziwe ngomdongwe, ixabiso lomgangatho wokulaminisha, ukuhlala kwawo, apho ungayifaka khona, indlela yokuyifaka, kunye nezinye izinto ezilungileyo nezingalunganga.
Yintoni i-Laminate Flooring Made ye ?
Ukuthetha ngokubanzi, i-laminate flooring yenziwe ngamanqanaba amathathu. Ukusuka ezantsi, zezi:
Isiseko esixineneyo okanye isiseko sophahla seplywood okanye uxinizelelo oluphezulu lwe-fiberboard ukunika amandla okomelela kunye nozinzo. Esi siseko sinye esifanayo sisetyenziselwa ezininzi iimveliso zeemithi ezenziwe ngobunjineli.
Isisombululo esiphakamileyo, umfanekiso-okwenyani womfanekiso. Kwakhona, lo maleko wemifanekiso uhlala ulingisa ukhuni — kodwa ungafumana ukujonga ngamatye kwanokubonakala kwesinyithi okwahlukileyo.
Umaleko wokunxiba okhuselayo ukubonelela ngobulukhuni nokhuseleko. Olu luhlu lukhuni kakhulu, lwenza i-laminate ibe yenye yezona ndlela zomeleleyo zomgangatho ojikeleze umhlaba.
Ungayifaka phi i-Laminate Flooring?
I-Laminate ilungile kwiindledlana, iindlela zokungena, amagumbi okutyela, kunye namagumbi okuhlala (kuba umaleko wayo onxibe okomeleleyo uthetha ukuba inokuma kwizithuthi ezinobunzima kunye nemikrwelo). Kodwa ukubonwa kwayo okuhle kuyenza ukuba ilungele ngokupheleleyo amagumbi okulala, amagumbi osapho, kunye neekhitshi kwezinye iimeko.
Egqithileyo Umgangatho weplamin kwimibala yeparquet
Okulandelayo: Umqolo owomileyo
Umgangatho weplamin kwimibala yeparquet
Umgangatho we-Ecomomic laminate floor EIR Series